Amagumbi okuHlala eParco Meridiana - I-Airbnb
Amagumbi okuHlala eParco Meridiana
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguРоман
Amagumbi abekwe kwindawo entle kunye nendawo yokuhlala yabucala iParco Meridiana. Yona ibekwe kwindawo ezolileyo yasePetrosa. Kumhlaba wekhompleksi kwinkonzo yakho: isolarium, ichibi langaphandle elinejacuzzi kunye neendawo zokuhlala zabucala. Ifulethi linayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi. Indawo yokupaka yabucala. Ukuya elwandle imizuzu eyi-15 phantsi kwethambeka, endleleni uya kuba nepanorama emangalisayo yoLwandle lwaseTyrrhenian kunye nedolophu endala yaseScalea.
Indawo yabucala iya kuqinisekisa ukuba uhlala ulungile. Indlu ine-TV ye-intshi ye-50 ye-intshi ye-flagship (4K, iiglasi ze-3D ezisebenzayo, ulawulo olukude olusebenzayo, ulawulo lwezwi) oluxhasa zonke iinkonzo zanamhlanje (i-Netflix, i-Amazon Prime, i-Youtube ...). Ikhompyutha yokudlala enofikelelo lwe-Intanethi kunye nesoftware efakwe ngaphambili iqhagamshelwe kwi-TV. Ngesicelo sondwendwe, nawuphi na umxholo ufumaneka kumgangatho ophezulu. Kukho izityalo ezininzi ezintle, imithi yesitrasi kwintsimi ye-complex, eya kuba yinto eyongezelelweyo kwiholide yakho. I-pool bar iyavulwa kulo nyaka.
I-Parco Meridiana complex iphakama ngaphezu kombindi we-Scalea, ikwenza kube lula ukonwabela iipanorama ezintle zedolophu yakudala kunye nolwandle olumangalisayo lwaseTyrrhenian kwindlela eya elwandle. Ukuba kukho imfuneko, ungalungiselela uhambo oluya kwizixeko ezikufuphi zamandulo ezifana ne-Orsomarso, i-Diamante, i-Santa Maria del cedro kunye nezinye iindawo ezininzi zembali apho unokonwabela imihlaba engalibalekiyo kunye nelifa lembali.
Ndihlala ndikwi-intanethi. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane nam ngoko nangoko. Ndiza kuzama ukuphendula isicelo sakho ngokukhawuleza kwaye ndiza kuzama ukwenza iholide yakho ingakhathazeki kwaye ingalibaleki.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Scalea